Wararka - 2021 taranka digaagga, doorsoomaha ugu weyni maaha suuqa, laakiin quudinta ……
daawo geedka xoolaha
xayawaanka bisadaha eyga
Cilmi -baarista iyo horumarinta
2021 dhaqashada digaagga, doorsoomaha ugu weyni ma aha suuqa, laakiin quudinta ……
Dhab ahaantii, hadda soo kabashada suuqa digaagga ayaa waliba xisaabin kara. Qiimaha badeecooyin badan oo digaaga ayaa gaadhay heer isla muddadii sannadihii hore, qaarkood waxay ka sarreeyeen xitaa qiimihii celceliska sanadihii hore. Laakiin sidaas oo ay tahay, dad badan ayaan weli ku dhiiran inay dhalaan, taas waxaa ugu wacan qiimaha quudinta oo aad sare ugu kacay sanadkan.
Tusaale ahaan digaagga dhogorta hilibka, fiiri qiimaha digaagga dhogorta kaliya, hadda 4 ka badan bisad, aad u fiican. Haddii la meeleeyay sanadihii hore, macaashka beeraleyda qiimaha ahi aad buu u badan yahay. Laakiin sannadkan, sababtoo ah qiimaha quudinta oo sarreeya, qiimaha kor u qaadista kiilo digaag ah ayaa gaaray 4 yuan.
Marka loo eego xogta tirakoobka, hadda 4.2 yuan oo ku saabsan jinka digaagga dhogorta hilibka ah, waxay la mid tahay qiimaha, macaashka faa'idada aad buu u hooseeyaa, heerka badbaadada lama dammaanad qaado, iyo xitaa khasaare yar.
Sidaa darteed, taranka digaaga ee sannadka soo socda, intee faa'iido ah, ayaa inta badan ku xiran isbeddellada qiimaha quudinta. Suuqa digaagga waxay u badan tahay inuu fiicnaan doono haddii aysan jirin wax la yaab leh, laakiin sicirka quudintu wuu ka duwan yahay.
Si loo falanqeeyo isbeddelka qiimaha quudinta sannadka soo socda, waxaan u baahannahay inaan ku bilowno dhowr arrimood oo muhiim ah oo gacan ka geystay sare u kaca qiimaha quudinta. Dad badan ayaa og in sababta tooska ah ee kororka qiimaha quudinta sannadkan ay tahay kororka qiimaha maaddooyinka quudinta sida galleyda iyo cuntada soybean, laakiin taasi waa mid ka mid ah sababaha.
Dhab ahaantii, hadhuudhka sannadkan waa mid goos goos ah, wax -soo -saarka galleyda qaranku wuu ka sarreeyaa sannadkii hore. Laakiin maxaa qiimuhu kor ugu kacay markii dalaggii galleydu aad u badnaa? Waxaa jira saddex sababood.
Marka hore, soo -dejinta galleyda ayaa saamaysay. Cudurka dillaacay awgiis, dhammaan ganacsigii wax soo -dhoofinta iyo dhoofinta ayaa saameeyay sannadkan, hadhuudhkuna waa ka reeban yahay. Sidaas darteed, sahayda guud ee hadhuudhka ayaa xoogaa ka horreysa dalagga cusub ee sanadkan.
Marka labaad, sannadkii la soo dhaafay, wax -soo -saarka doofaarkeennu aad ayuu u soo kabsaday, sidaa darteed baahida quudinta ayaa iyaduna aad u sarraysa. Tani waxay sii kicisay galleyda, digirta iyo wax -soo -saarka kale ee quudinta oo kor u kacay qiimaha alaabta ceeriin ah.
Midda saddexaad waa kaydinta macmalka ah. Iyaga oo filanaya in qiimaha galleydu kor u kacayo, baayacmushtariyaal badan ayaa hadhuudh urursanaya oo sugaya in qiimaha uu sare u kaco, shaki kuma jiro in si farsameysan kor ugu kaco qiimaha.
Waxaa ka sarreeya qiimaha quudinta sannadkan, qiimaha galleyda oo kor u kacaya dhowr arrimood oo muhiim ah. Laakiin dhab ahaantii, sicirka quudinta ayaa kor u kacaya ma aha oo kaliya saamaynta kor u kaca qiimaha galleyda, laakiin sidoo kale sabab aad u muhiim ah, taasi waa “mamnuucidda iska caabbinta”.
Waqtiga dhejinta: Jul-27-2021
Cinwaanka: Qolka 2210, Dhismaha A, Yihongxia, 298 Zhonghuabei Street, Degmada Xinhua, magaalada Shijiazhuang, Gobolka Hebei, Shiinaha
Habka dawaynta lagu taliyey ee broi ...
Qiimaha dawada ee duur -joogta ayaa hooseysa ...
2021 taranka digaagga, kala duwanaanshaha ugu weyn ...
Farqiga u dhexeeya quudinta isku -darka iyo ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2021: Dhammaan Reserved Rights.